यस्तो छ मधेसमा आगो बाल्ने रणनीति... - Jhilko
काठमाडौं । तराई–मधेसको राजनीतिलाई तताएर मुलुकलाई पुनः संकटमा फसाउने खेती सुरु भएको घटनाक्रमहरुले देखाउन थालेको छ । गएको चैत्र महिनामा तराई मधेसलाई गिजोल्ने प्रयास स्वरुप नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञहरुको दौडाहाको प्रयास यतिखेर आएर छर्लङ्ग भएको छ । समयबद्धले गत चैत्र ५ गतेको अंकमा प्रकाशित भएको समाचार अनुसार त्यसबखत नेपालका लागि भारतीय तथा अमेरिकी राजदुत मञ्जितसिंह पुरी र ¥याण्डी बेरीको योजनाको बाछिटा यहीनेर आएर पुष्टि भएको छ ।
मोर्चा सक्रिय :
त्यसबखत अमेरिकी राजदुत बेरीले पश्चिम नेपालमा गरेको दौडाहा र नेपालगञ्जमा गरेको मन्त्रणाको रुपरेखासँगै तराईलाइ विवादित बनाउने मेलोमेसोको संकेत यतिखेर मधेसको राजनीतिमा तेर्सिएको छ । यसै मेलोमा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) सीमावर्ती स्थानमा सक्रिय भएको समाचार प्राप्त भएको छ । उनले संगठनलाई पुनर्संरचना गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा गतिविधि तीब्र बनाएका छन् । लामो समय निस्क्रिय रहेका गोइतको मोर्चा सक्रिय हुन थालेपछि मधेसको राजनीति गर्माएको पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो समय तराई मधेशमा आन्दोलन उठाउन खोज्ने वैध÷अवैध राजनीतिक शक्तिहरुको गतिविधिले पनि त्यसको पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ ।
गोइतको अग्रसरतामा गत वैशाखमा पूर्वी नेपालको सीमासँग जोडिएको भारत सुपौल जिल्लाको पिपरा बजार लगायतका विभिन्न स्थानहरुमा फरकफरक मितिहरुमा वैठक भेलाहरु गरेका थिए । त्यसपछि नेपालभित्रका सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा गतिविधिलाई तीव्र पारेका हुन् । यस्ता बैठक तथा भेलाहरुमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) का संयोजक गोइतका साथ केन्द्रीय सदस्यहरू सत्यनारायण मण्डल, एस.के. झा र देवकान्त वरवरिया लगायतका व्यक्तिहरु उपस्थिति रहने गरेको जनतान्त्रिक, सप्तरीका एक जिल्ला नेताले जनाए । गोइतले नयाँ शिराबाट संगठन बनाउँदै अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
यसका लागि उनले तराई मधेशमा पहिला जिल्ला समिति गठन गर्ने योजना बनाएका छन् । जिल्ला समितिको गठन गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय समितिको विस्तारका लागि व्यक्तिको छनोट गर्नेछन् । कार्यक्रममा उनले भने, ‘अब म आफैले संगठन निर्माण र कार्यकर्ता परिचालन गर्नेछु । स्वास्थ्य स्थितिले गर्दा मैले केही वर्ष विश्राम लिएको थिएँ तर अब म पूर्ण स्वस्थ भएको छु ।’ स्रोतका अनुसार मधेसवादी पार्टी र २ नं प्रदेश सरकारसँग कार्यगत एकता गरेर मोर्चाले सक्रियता बढाउने योजना बुनेको छ ।
वैधानिक र अवैधानिक संघर्षको तालमेल गर्दै पहाडिया शासक र शासन दुबै समाप्त पार्ने रणनीतिबारे उनले जानकारी दिँदै आएका छन् । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता डा. सीके राउतले जस्तै उनले अब लुकेर होइन खुल्ला ‘वार’ गर्ने चेतावनी पनि बैठक र भेलाहरूमा गरिरहेका छन् । अन्य प्रदेश सरकारको तुलनामा दुई नं प्रदेशमा संगठन विस्तार र अभियान ठोस पार्न अनुकूल रहेको मोर्चाको अनुमान छ । त्यसपछि प्रदेश एकको तराई भागमा पनि प्रशिक्षण तथा संगठन विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ । भारतको सीतामाढी जिल्लाका गुरूशरण सिंहले पनि तराई मधेशमा सक्रिय भएका र हुनसक्ने समूहसँग सम्बन्धको विस्तार गरिरहेका छन् ।
गत चैत्र महिनामा राजदुतद्वयको मधेस दौडाहा हुनु नेपालगञ्जमा राजनीतिक दलका नेताहरु र काठमाण्डौदेखि कहलिएका कथित राजनैतिक विश्लेषकहरुलाई समेत सहभागी गराएर गरिएको विवादास्पद भनाइहरुको परिणाम अहिले तराईमा देखिएको हो । त्यस बखत भारतीय राजदुतले पूर्वी तराई र अमेरिकी राजदुतले पश्चिम तराईको कमाण्ड सम्हाले झै गरेका थिए ।
गठबन्धन तीब्र :
यसैबीच गोइत समूहले गठबन्धन पनि तीब्र बनाउँदै लगेको समाचारहरु प्राप्त भएका छन् । जनअभिमत पार्टी खोलेका राउतसँग पनि सिंहले सम्पर्क गरिरहेका छन् । वैधानिक बाटोमा आएको राउत र अवैधानिक शक्ति गोइतबीचको पुल बनेर सहयोग गर्ने योजनामा रहेका छन् । सिंहले यस्तो योजना बनाउनुमा राउतले पार्टीलाई दर्ता गराई अभियान सञ्चालन गर्न थालेको देखेर बनाएको स्रोतको दावी छ । यतिमात्रै होइन समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टरार्ईले तराई मधेशमा आन्दोलन उठाउन खोजिरहेको देखिएको छ । यसले पनि मधेशमा उथलपुथल ल्याई समग्र देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोज्ने सक्रिय भएको पुष्टि गर्छ । राउत समूहका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र शर्माले वैधानिक बाटो समाउनु पर्ने बाध्यताले मात्र पार्टी दर्ता गराउनु परेको उल्लेख गरेका छन् । समयबद्धसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो मुख्य मुद्धा स्वतन्त्र मधेस नै हो । वैधानिक बाटो नअपनाउँदा आइलाग्ने अप्ठ्यारोको कारण मात्र यो बाटो रोजिएको हो । अहिले पनि हाम्रो पछाडि सरकार लागि रहेको छ । हामी स्वतन्त्र मधेसको जनमत बनाउँदै उपयुक्त समयमा मुद्धा स्थापित गरी छाड्ने छौं ।’
समाजवादीमा खटपट :
मधेसको राजनीतिलाई लिएर यतिखेर समाजवादी पार्टीमा पनि खटपट सुरु भएको छ । बाबुराम भट्टराई सरकार छाडेर मधेस आन्दोलनमा जानुपर्ने विचारमा छन् । तर, पार्टीको अर्का अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव मौकाको खोजीमा रहेका छन् । आन्दोलन उठाएर मात्रै नहुने त्यसको कम्पनलाई केही बेर कायम राख्न नसके आन्दोलनबाट फाइदा नहुने यादवले बुझिसकेकाले तत्कालै सत्ताको बाटो छाड्न नखोजेको पार्टी निकटले बताउन थालेका छन् । उपेन्द्र निकट नेताका अनुसार भट्टरार्ईको नीतिमा यादव होइन यादवको नीतिमा भट्टरार्ई आएकाले सत्तामा बसेर संविधान संशोधनको राजनीति पार्टीमा चल्ने छ ।
भट्टरार्ईले सरकार छाड्नुपर्ने निर्णय गराउन चाहेका हुन भने उनले पार्टीबाट निर्णय गराउनुपर्ने समाजवादी स्रोतले जनाएको छ । सत्ता छाड्ने वा बस्ने राजनीतिबीच पार्टीमा विवाद देखिएको छ ।
समाजवादी पार्टीमा पनि तराई मधेशमा आन्दोलन गर्नुपर्ने लाइनलाई बाक्लो पार्नुपर्ने डा. भट्टरार्ईको योजनाले पनि तराई मधेशमा गम्भीर प्रकारको तानाबाना बुनिदै गरिएको दर्शाउँछ । सरकारले जुनसुकै बेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । त्यतिखेर दुई तिहाईको आवश्यकता हुन्छ । त्यसमा समर्थन दिएर पार्टीको राजनीति जोगाउने लाइनमा यादव रहेका छन् । यादवले राजपासँग एकता गर्न नखोज्नुको पछाडि पनि यही राजनीति रहेको देखिन्छ । यता संसदीय गणितको आधारमा ठूलो शक्ति राजपासँगको एकतालाई तत्काल टाढा राखेर भट्टरार्ईसँगको एकताबाट उपेन्द्रले पाउने रणनीतिक फाइदा प्राप्त गरिसकेका छन् ।
पार्टी फोडेर जाने डा. भट्टरार्ई तत्कालै जाने हिम्मत नगर्ने गुह्य यादवले बुझेकाले सत्तामा बसेर संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने योजनामा कार्य अगाडि बढाइरहेका छन् ।
समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच वैशाख २१ गते एकीकरण हुनुअघि भट्टराईले सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यादवले पार्टी एकीकरण गरौं र त्यसपछि पार्टीको निर्णय सरकार छाड्ने सरकार छाडौला नि भनेर सरकार छाड्न तयार भएका थिएनन् । यो नै राजनीतिको चुरो लाइन थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री भइसकेका र लामो समय माओवादी जनयुद्धको शीर्ष नेताहरुमध्ये एकको रुपमा काम गरिसकेका डा. भट्टरार्ईले यादवको त्यो राजनीति बुझ्न नसकेको भनाइसँग उपेन्द्र निकट स्रोत सहमत हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार उपेन्द्रले सरकार छाड्न अझ समय लम्ब्याउन पाउने राजनीतिक अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र त्यति समयसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे मात्रै सरकार छाड्न उचित हुने भनी भट्टराईलाई विश्वास दिलाएका थिए ।
अहिले यादव विजय गच्छेदारको पदचापमा छन् । कुनै बेला सत्तामा टाँसिरहने नेताको रुपमा देखिएका कांग्रेसी नेता विजयकुमार गच्छदारले भनेका थिए, ‘राजनीति सत्तामै बस्नका लागि हो जोगी बन्नका लागि होइन’ यो गुह्य सत्ता बाहिर बसेर यादवले नबुझ्ने कुरो भएन ।
पार्टी एकीकरणपछि समाजवादी पार्टीले सात प्रदेशका आठ वटा शहरमा सम्पन्न गरेको कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत् सरकारलाई दबाब दिइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, पूर्ण समानुपातिक संसद्, नागरिकता लगायत विषयमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पार्टीका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
उपेन्द्र निकट मानिएका समाजवादी पार्टीका महासचिवले जनाए अनुसार संविधान संशोधन नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने पार्टीको स्पस्ट दृष्टिकोण छ । तर, सरकारले संविधान संशोधनको मागप्रति असहमति नजनाएकाले सत्तापक्षसँग गरिएको दुई बुँदे सम्झौताको औचित्य सकिएको छैन । उनले भने “संविधान संशोधन नहुने अवस्था देखिए समाजवादी पार्टी सरकारमा बस्दैन । त्यसका लागि समय आउनु पर्छ ।”
पार्टी निकट स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनको माग सत्तापक्षबाट पूरा भए पार्टीलाई प्राप्त भएको अवसरमा बृद्धि हुने छ । राजपासँगको एकता र प्रतिस्पर्धा दुबै किसिमको राजनीतिलाई अगाडि बढाएका यादवले यो राजनीतिको गुढ विषयलाई बुझेका छन् । त्यसैले हतारिएका छैनन् । राजपाका नेताहरुको कारण प्रदेश नम्बर २ को सरकारको छवि राम्रो नभएको बुझाई यादवको दिमागमा परेको छ ।
जसरी राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले संयोजक महन्थ ठाकुरसँग गरेको व्यवहारबाट समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू तिनै हुन जसले यादव र ठाकुरलाई मन्त्री बन्ने नाउँमा एक्ल्याएको थिए । डा. भट्टरार्ईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु नै रहेका थिए । त्यतिखेर यादव र ठाकुरको पार्टी टुक्रा टुक्रा पार्ने काम भएको थियो ।
त्यसैले यादवले आन्दोलनबाट अधिकार सुनिश्चित हुने धरातलीय यथार्थ ठोस नभएसम्म सत्ता नछाड्ने रणनीति लिए पनि प्रदेश नम्बर २ लाई धुरी बनाएर उपद्रो मच्चाउने योजना कतै ठोस भइरहेको भनाइलाई त्यसै बेवास्ता गरिहाल्ने स्थिति भने देखिदैन ।
यसरी मधेसमा आगो सल्काएर राजनीतिको रोटी सेक्ने उपक्रम सुरु भइसकेको छ । भारतीय निर्वाचनको परिणाम आउन मात्र बाँकी थियो । त्यो परिणामले पनि मधेसमा डढेलो लगाउन इन्धनको काम गरेको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीः शान्ति, लोकतन्त्र र विकास एकअर्काका...
जेट्लीको शनिबार एम्स अस्पतालमा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
विकास र समृद्धिको मार्गमा अप्ठ्यारो पार्ने प्रवृत्ति छः...
सरकारले नयाँ लक्ष्यप्राप्तिका लागि नयाँ ढङ्गले अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै मन्त्री...